I-Course kwiimarike zomhlaba ezingabonakaliyo kunye nokulawulwa kwemithetho - Geofumed
I-Course kwiimarike zomhlaba ezingaqhelekanga kunye nokulawulwa komthetho
NgoSeptemba, 2011 Ukufundisa i-CAD / GIS, UkuCwangciswa kweziThili
Iindawo zokuhlala ezingaqhelekanga zichazwe kwaye zilinganiswe kangakanani (ubukhulu)?
Iindawo zokuhlala ezingaqhelekanga zenziwe njani?
Yiyiphi imida yokungenzeka (ukuvandlakanywa kokusebenza) kweenkqubo zokulawula?
Ziziphi iinguqu kunye nemigangatho kwiimeko zokuhlala ezingaqhelekanga kwiLatin America?
Kutheni imveliso yokwazisa iqhubeka naphezu kwemali eninzi etyalomali kwi-regularization, uphuculo kunye neenkqubo zokuvelisa izindlu?
Ngexesha kwaye njani (kwiimeko zentlalo-zentlalo-nkqubo) zingayenza njani inkqubo yokulungisa kunye nokuphuculwa?
Ngubani omele ahlawule kunye nendlela yokulawulwa kweenkqubo?
Iimpembelelo zentsebenziswano yokuphucula nokuphuculwa kweenkqubo zithintela ukuthintela izakhiwo ezintsha ezingaqhelekanga?
Yintoni eya kuba yiminqweno enqwenelekayo kunye / okanye eyimfuneko yemigaqo-ngqo okanye engaqondakaliyo yokunciphisa ukungalingani?
Ukuba ezi imibuzo ofuna iimpendulo okanye approximations oko ziingcali bacinga Planning Territorial kunye nabacwangcisi: The Lincoln Institute of Policy Land wabamba uhlelo lweshumi
Inkqubo yoPhuhliso loPhuhliso kwiMatethi kunye noMthetho wokuLungiswa kweendawo zokuLungisa eLatin America
Eza kubanjelwa e Montevideo, Uruguay, i 4 ukuya 9 Disemba 2011 (ngeCawa ukuya ngoLwesihlanu), lisebenzisana kunye neNkqubo Uhlanganiso zamatyotyombe (PIAI), i-Ofisi yoMphathiswa leZindlu, loCwangciso lweMihlaba nokusiNgqongileyo yaseUruguay, kunye neNkqubo yeZizwe eziManyeneyo zokuHlaliswa kwaBantu (UN-HABITAT).
Le khosi kukunika ithuba lokuhlolisisa sikweni neenkqubo regularization amatyala yomiwo mhlaba evela Latin American kunye namanye amazwe. iindawo Uhlalutyo zibandakanya ulwazi unxibelelwano phakathi kwiimarike umhlaba ezisesikweni nezingekho sesikweni, iinkalo othintelo lwe sikweni-sikhokelo-nkqubo yezindlu kunye nokufikelela kumhlaba ezidolophini, kwakunye nemiba yomthetho kunye noqoqosho ezinxulumene nokhuseleko lwengqesho. Inkqubo yekhosi ikwabandakanya ezinye iinjongo ezifana nepropati kunye namalungelo oluntu; ezinye iinkqubo zomgaqo-nkqubo; ezintsha iintlobo zamaziko kunye neenkqubo zolawulo ezivumela ezinye iindlela zokuphumeza iinkqubo neeprojekthi, kubandakanywa ukubandakanyeka koluntu; kunye nokuphononongwa kweeprojekti kwiprojekthi nakwizinga le sixeko.
Le khosi ijolise iingcali Latin American abanamava ababandakanyekayo arhente zoluntu, ii-NGO, amacebiso, amagosa karhulumente, amalungu esigqeba, amasebe nemithetho neenkundla, kwakunye abaphandi kunye nabahlohli inxaxheba kuhlalutyo kwiimarike kunye nemiba umhlaba enxulumene ukuhlaliswa kweedolophini kunye nokuhlala okungaqhelekanga.
Umhla wokugqibela wokufaka isicelo uvala 7 Oktobha ka-2011.
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, tyelela iphepha lekhosi ngokusebenzisa isixhumanisi esilandelayo esi sixhobo ekhokelela kwiphepha apho uxwebhu olubizwa khona Ifowuni kunye neNkcukacha, ichaza iinjongo kunye nezihloko ekufuneka zibhekiswe kuzo, kunye nolwazi oluyisiseko malunga nemigaqo yesicelo kunye nokuthatha inxaxheba.
Ngokuqinisekileyo kwiikhosi ezininzi ziya kuba nomdla kunye nento esisebenzisa ngayo ukusasaza, ngelixa sithemba ukuba uyakwenza phakathi koogxa bakho kunye namaziko ahlobene.
Imibuzo kunye nolunye ulwazi, nceda uqhagamshelane:
Okuqukethwe kwenkalo: UClaudio Acioly (Claudio.Acioly (kwi) unhabitat.org)
Inkqubo yesicelo kunye nemisebenzi: IMarielos Marin (marielosmarin (at) yahoo.com)
Kwakhona ukuba uqaphele izifundo ezifanayo ezikhuthazwa yiNkampani yaseLincoln, unokuzilandela kwi-Facebook kunye ne-Twitter.
Post edlulileyo«Edlulileyo Yintoni entsha kwi-Global Mapper 13
Post Next I-AutoCAD zemvume zeMfundoOkulandelayo "